Ukubopha inqaku loMlobi
Igama lokwenyani leqhina loMlobi ngu Ukuphuculwa kweqhina leklinikhi. Kodwa emva phayaa xa, abantu abaninzi babeyibiza njengeqhina loMlobi kuba wonke umlobi wayesazi indlela yokuyibopha, kwaye yayihlala iliqhina lokuqala abafunda ukulincamathisela umtya wokuloba kwihuku.
Imiyalelo yokubopha amanqaku isebenzisa imiqathango embalwa esemgangathweni. La magama ayazichaza, kodwa ukuze uqiniseke ukuba imiyalelo icacile, nantsi:
Ukuphela kosuku: Ukuphela komgca wakho. Le yinxalenye yokwenza ukubopha iqhina.
Umgca wokuma: Eminye imigca ebalekela phezulu kwi reel.
Jika: Ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba yi- urhangqo. Ithuba lokwenzeka xa udlulisa isiphelo sethegi ngokujikeleze umgca wokuma.
Ukubopha iqhina lekliniki eliphuculweyo, i-knot ye-Fisherman's knot, landela la manyathelo:
Sebenzisa isiphelo somaki kwiliso lokuloba uze utsale ii-intshi ezi-8-10 zemigca ngelihlo lokuloba.
Songa isiphelo sethegi kwisiphelo sokuma semisongo emihlanu okanye ukujika.
Ngoku dlulisa ukuphela kwethegi nge-loop ecaleni kweliso lokuloba.
Uyile enye iluphu ebandakanya ukusonga kwakho.
Dlulisa itag yokuphela kweloop.
Manzisa amaluphu ngamathe athile ukuze uthambise iqhina.
Bamba ukuphela kwethegi kunye nokuphela kokuma kwelinye icala kunye nokugoba kwehaki kwelinye; emva koko tsala ngoxinzelelo oluzinzileyo .
Ukuba awuqinisekanga ngokubamba ikhonkco ngokukhuselekileyo, bamba ngokuqinileyo kodwa ungagungqi ngokuqinileyo ngeepleyiti zempumlo yenaliti.
Cofa ukuphela kwethegi ukuze kushiyeke i-1/8-intshi kuphela.
Isicoci seenzipho esisezantsi sisixhobo esihle sokwenza ukusika kokugqibela okucocekileyo kwisiphelo sethegi.
Endaweni yokunqunqa ithegi ukuya kwi-1/8 intshi, ungashiya ukuphela kwethegi malunga ne-1/4-intshi ukuya kwi-3/8-intshi ubude kwaye emva koko uchukumise incam yesiphelo sethegi kwisiphelo esishushu sesigarethi esikhanyisiweyo (okanye umdlalo ophume nje) ukuze wenze ibhola ekugqibeleni komgca, ethintela ukuphela kwethegi ekukhutsheni ngaphandle koxinzelelo.
Ithini ithiyori ye-endosymbiosis
I-tanzeum isebenza njani
ungayithatha njani iAdderall xa ufunda
yintoni ixabiso le-p kwizibalo
mamela iipodcast kwi-pc
Ufunda njani nge-ged